မှန်ရှေ့မှာ ဆံပင်ကို ကိုယ်တိုင်ညှပ်ပြပြီး ကွကိုယ်သဘောတွေကျနေတာ ကိုယ်တော်ချောက ? BTS ရဲ့ official Twitter မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ကတ်ကြေးနဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညှပ်တဲ့ Jin ရဲ့ Video ဟာဆိုရင် ARMY တွေရဲ့ Twitter တစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်ခဲ့တဲ့အထိ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ( ညှပ်တဲ့ကတ်ကြေးကလဲ နဲနဲနောနောလား ?) ယူက ဒါမျိုးလည်းရတာပဲလားနော်? […]
Music NewsK-PopPeopleLeaveacomment
Wanna One အဖွဲ့သားတွေဟာ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတာ ရက် ၂၀၀ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ March လထဲမှာသူတို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Mini Album နဲ့အတူ ပရိသတ်ရှေ့မှောက်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Confirm လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Wanna One အဖွဲ့သားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ Wannable လေးတွေအတွက် အရမ်းကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ရက်၂၀၀ ပြည့်အနေနဲ့ သူ့တို့ရဲ့ Fan တွေအပေါ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ Special Theme […]
EXO အဖွဲ့နဲ့ CL တို့ Olympic ပိတ်ပွဲရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်
KPOP လောကရဲ့နာမည်ကြီး Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက အနောက်တိုင်းနိုင်ငံအချို့မှာပါ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ CL တို့အတူ ‘Pyeongchang Winter Olympic’ အားကစားပွဲတော်ကြီးရဲ့ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့စပ်လျဉ်းတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Closing Ceremony မှာ EXO နဲ့ CL တို့ကို ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေကိုယ်စားတက်ရောက်ရန် အိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) မှသေချာရွေးချယ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Closing Ceremony နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရာမှာ EXO အဖွဲ့သားအားလုံးက […]
Coffee Shop လေးအသစ်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ G-Dragon
Bigbang အဖွဲ့ရဲ့ လူကောင်သေးသေးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ အဆိုတော်လေး G-dragon က Jeju ကျွန်းမှာ Cafe Shop လေးတစ်ခုထပ်ပြီးဖွင့့်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာလမှာ Aewol မှာ ကမ်းခြေလေးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ‘Cafe Monstant Aewol‘ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ GD ဟာ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်လောက်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Bigbang ရဲ့ ‘Last Dance’ concert ပွဲပြီးထဲက Jeju […]
Demi Lovato က သူမ Drake အကြောင်းအိပ်မက်မက်တယ်လို့ ပြောကြား
Wait What!?? Demi Lovato က ဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းတုန်းက သူမရဲ့ twitter စာမျက်နှာမှာ Drake အကြောင်းအိပ်မက်မက်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဲဒီအိပ်မက်အသေးစိတ်ကိုပါ ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ tweet ထဲမှာ အိပ်မက်ထဲမှာ သူမရဲ့ဖိနပ်ကြိုးက ပြေလျှော့နေခဲ့တာကို Drake က ပြန်ချည်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Drake က ဖိနပ်ကြိုးချည်ပေးနေရင်း သူမကို မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြပြီး “God’s Plan” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့။ I hada[…]